Uru nke Igwe ese foto site na ulo oru - OMG Solutions
Igwe eji eme onyonyo a na-eyi n’igwe bidoro na ngalaba ndị uwe ojii, enwere mkpa inyocha ọtụtụ mkpesa na-esite n’aka ụmụ amaala. Gọọmentị dị ezigbo mkpa ịmata ihe ndị ọrụ ga-eme. Ndị a butere igwefoto ahụ yi n’elu ịdị adị, ha bụ naanị ngwaọrụ igwefoto eyi n’elu ahụ nwere ike iji hụ ihe ọ bụla mmadụ na-eme n’oge. Nke a bara uru karịsịa nye ndị uwe ojii oge ọrụ, ịkụnye ihe mmemme ahụ nyeere aka nke ukwuu ebe ọ na-enyere aka belata mkpesa ndị na-abịa maka ojiji ike na omume enweghị isi n'etiti ndị uwe ojii. Kemgbe ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ ndị ọzọ amalitela imejupụta igwefoto ahụ na mmemme ọrụ ha. Ekwenyere na dị ka o nyeere ndị uwe ojii aka nke ukwuu, ọ nwekwara ike inyere ha aka n'ụzọ ndị bụ isi ka anyị na-aga n'ọgbọ ọrụ na-abịa n'ihu. Industfọdụ ụlọ ọrụ ebe ejiri ha bụ:
Eletriki, gas na ọrụ ọcha
Ego, ego mkpuchi na ala
Agriculture: Akụkụ ọrụ ugbo na-etolite n'ọtụtụ dị ukwuu, a na-emegharị ngwa na igwe dị iche iche. Mgbe ha nọ n'ugbo, ndị ọrụ na-eyi kamera ahụ nwere ike idekọ ọrụ ha kwa ụbọchị ma nyekwakwuo anya nke ga-agba akaebe na ọrụ ha na-ekwu na ha na-arụ. Ọ nwere ike iji ndị ọrụ na-enye ehi, ndị ọrụ na-achịkọta àkwá, ọbụlagodi maka owuwe ihe ubi akwụkwọ ntuziaka na-adịghị etinye maka iji ndị ọkwọ ụgbọala. Inwe igwefoto ahu n’ezie gha mee otutu nleba anya n ’ugbo a. Ọ ga - emekwa ka ngosipụta, na - ebe ihe na - efu efu ma ọ bụ mkpụrụ dị ala karịa ka a tụrụ anya. Ọ bụ ezie na onye ọrụ na-egosi anụmanụ ahụ maka ọrịre, ọ ga-adị mma ịnweta igwefoto ahụ nwere anụ ahụ nke ga-eme ka a hụ ya anya anụmanụ ya ka ọhụhụ anya ya ma ọ bụ ọ bụ zikwa ya ụdị anụmanụ ga-ahọrọ. Maka ndị ọrụ na-anya ụgbọ ala, ịnwe igwefoto ahụ nwere ike inyere ha aka ịmata ihe ha na-akọ na otú ha si arụ ọrụ ha. Agbanyeghị na agwakọtara ihe ndị a niile, ọ dị mkpa na enwere ụlọ ebe ihe nkesa na-aga ebe a ga-ahụ ma ọ bụ na-ahazi ihe niile. A ga - echekwa ya dị ka ihe akaebe mgbe ọ bụla enwere ike ịkwado ma ọ bụ tufuo onye ọrụ. Inwe nchekwa na ugbo ahụ jiri igwefoto ahụ mee ka ọ nwekwuo nchebe na ugbo, na-eme ka o kwe omume ịmata onye ọ bụla na-abanye ma na-esi n'ọnụ ụzọ. Igwefoto eyi ahu nwere ike wegharia oru ubi maka usoro ozo.
Mining: Ime ka ndị ọrụ n'otu ụlọ ọrụ na-egwupụta akụ na-ewepụsịrị ha kpamkpam na ọkwa ọzọ, ọ na-eme ka nkwukọrịta na ntụziaka dị mfe karị. Ọ na - eme ka njikwa ọrụ dịpụrụ adịpụ dị ka ị nwere ike ịnọ anya nke ukwuu, mana ka na - ahazi ndị ọrụ gị na - enye ha nkọwa dị iche iche na ntụziaka banyere ihe ọ ga - eme na otu esi eme ya. Ọ bụ ezie na a na-anabata usoro igwefoto ahụ yana mbelata ọnụ ahịa njem njem ebe ọ bụ na ịchọghị njem njem mgbe niile maka nlekọta na akụkọ, ị ga-ahụ ihe a na-eme ka a na-eme. Site na iji igwefoto ejiri mgbe arụ ọrụ enwere nnukwu mmụba na arụmọrụ onye ọrụ ahụ, mara nke ọma na a na-enyocha ha niile ma na-enyocha ntinye ọrụ ha ebe ahụ, onye ọ bụla ga-achọsi ike itinye ike ha n'ọrụ ha. A na-emezi nchekwa oge ọ bụla ka enwere ike ịdọ ndị ọrụ aka na ntị ka ọghọm ya na ndị na-arụ ọrụ na-ahụ, a na-agakwa ha ngwa ngwa ka enwere ike ịme usoro ọgwụgwọ ngwa ngwa. Site na vidiyo vidio dị ndụ na-eme ka a na-eme ihe na 2-way audio ebe onye na-ekiri ya na onye ọrụ ahụ nwere ike ikwurịta okwu, nkwukọrịta dị ezigbo mkpa ma nwee ike ịchekwa ọtụtụ nrụgide na-egbochi ọtụtụ mbibi a gaara eme. Vidiyo kwesịrị ọnụ ahịa otu puku, ya na ihe eji eserese ahụ gị ị ga - agbachitere:
Esemokwu ndị ọrụ
Esemokwu nyefe ihe
Nkwupụta mkpuchi mkpuchi
Akwụkwọ ikike ikike
Owuwu: n’inwe ndị na-arụ ọrụ a na-ewu ihe na ụzọ ọ bụla, ị ga - enwe ka ha na - arụ ụfọdụ ọrụ iwu ụlọ nkịtị ebe a ka nwere ike ịhapụ ndị ọrụ nlekota gburugburu. Ọ bụrụ na ihe ọghọm nke na-adabakarị na saịtị nrụpụta saịtị enwere ike iji kpochapụ ihe. Nke a nwere ike gụnyere ịlele ma ha na-agbaso iwu na ụkpụrụ nchekwa ma ọ bụ ọ bụrụ na ha na-elezi anya mgbe ihe ọghọm ahụ mere. N’inye ndị ọrụ tinye igwefoto ahụ nwere eyi nwere ike inyere nchebe nke mpaghara ahụ aka, ọ na - eme ka nkwukọrịta n’etiti ndị ọrụ nchekwa na onye ọrụ ebe ahụ na - arụ ọrụ dị ngwa ma sie ike. Ọzọkwa, ndị ọrụ nchekwa n'ebe ahụ a na-ewu ahụ ga-ahụ igwefoto ahụ dịka ọ bara uru nke ukwuu, ebe ha ga-enwe ike ịkọ onye ọ bụla na-abanye na saịtị ahụ ozugbo wee chọpụta ma ha nwere ikike ime nke ahụ. Nke a bụ ụzọ ọzọ ejiri doo anya nke iji melite nchekwa saịtị. Bụrụ na nnukwu ihe ọghọm, enwere ike iji igwefoto a na-eji eserese rụọ ọrụ iji chọpụta ihe ọ ga-abụrịrị, igwu egwu a nwere ike ịkọwa otu nzukọ ihe ọghọm ahụ si mee. Site na kamera lens siri ike, enwere ike iwepụ onyoonyo mara mma dị elu ma rụọ ya iji rụọ ọrụ ma ọ bụ kọwaa.
Nlụpụta: ebe ọ dị ezigbo mkpa na ụlọ ọrụ n'ichepụta ngwaahịa ọ bụla / mepụtara nke ọma ga-adị ka ọkọlọtọ enyere. Enwere nkwarụ gburugburu, ọ dị ezigbo mkpa na ngwaahịa ahụ mgbe a na-ahụ ma nyochaa otu di na nwunye. Ọ dịkwa oke mkpa na maka ụlọ ọrụ nke metụtara ịgbakọta akụkụ, ha niile na-agbakọta nke ọma na ha niile na-agbaso ụkpụrụ ahụ. Inwe igwefoto a na-eyi n'ahụ na-eme ka ọ dị mfe inyocha na ịchọpụta na ngwaahịa ọ bụla emere, ha na-agakọ n'ụkpụrụ mmepụta nke ụlọ ọrụ ahụ ma na-egbutu ntụpọ na opekempe. Igwefoto ahụ dịkwa mkpa ebe ọ bụ na ihe ọghọm ebe ụfọdụ ihe mere na njikwa bụ iburu ibu ọrụ, eserese vidio site na ihe ahụ mere wee wepu ya. Hụ vidiyo dabara na akaebe onye ọrụ na-agba ọsọ ọsọ iburu ibu ọrụ na idozi. Igwefoto ahụ ga-ekwe ka ndị ọrụ ndị na-ahụ maka nlekọta nwee ike ịhụ ihe onye ọrụ ọ bụla na-eme. Site na nlekota oru anya n'ụzọ a, ọ na -adị mfe ime nyocha ndị ọrụ iji chụọ ndị umengwụ na ndị na-enweghị isi ebe ọ na-akwalite ma na-abawanye ụgwọ nke ndị dị oke njọ. Ozugbo ndị ọrụ mara na a na-ele ha anya, ọ na -emepụta mmata ndị a na ha nke na-akpali ha oge niile ime nke ọma ma na-etinyekwu uche na ọrụ. Ọ na-ebelata ịda mba ma na-agba ume ịrụ ọrụ siri ike iji hụ na ọ kacha mma.
Ụgbọ njem: Industrylọ ọrụ na-ebugharị ụgbọ elu amarala na ha ejiri igwefoto nyochaa ndị ọkwọ ụgbọala maka ugbu a, ha na-ejikwa GPS soro usoro ngagharị ngwongwo na ọnọdụ nke ndị ọkwọ ụgbọala ha na-eji ọrụ ha maka ịkwọ ụgbọala azụmahịa. Ndị ọkwọ ụgbọ ala, taksị na ọbụna ndị isi ụgbọelu na ndị ọrụ ụgbọ mmiri nwere ike iji kamera ahụ na-eyi. Inwe kamera ahụ na ndị ọkwọ ụgbọala kacha arụ ọrụ, enwere ike inyocha ha iji mara ma ha na-erubere iwu okporo ụzọ na-agbaso usoro iwu. Ọ na-eme ka ọ dị mfe ịchọpụta ndị ọkwọ ụgbọala hiere ụzọ ma tufuo ha. Ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala na-a drinkụ mmanya mgbe ha na-anya ụgbọala, ha na-a gettingụbiga mmanya ókè na-eme ka nnukwu ihe mberede mebie ụlọ ọrụ ha na-arụ maka ngwongwo. Enwere ike ịme ndị ọrụ ikuku nọ n’ụgbọ elu iyi igwefoto nwere ahụ mmadụ iji mara ma lelee ndị na-efe n'otu ụgbọ elu. Site na iji usoro nnata ihu, ọ na-adị mfe soro ndị omempụ ndị nwere ike ịbanye na bọs ma ọ bụ ụgbọ elu. Nwere ike ịmegharị njem dị mfe dịka ịmara ebe ọkwọ ụgbọ ala na-aga, ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọ ala na-akwụsị n'akụkụ niile maka ọtụtụ ihe na-abaghị uru, na igwefoto ahụ gị ga-enwe ike ịhụ mmegharị ha mgbe ha na-enyochakwa ọrụ ha nke nwere ike ịmetụta ọrụ ha. .
Communication: ngalaba nkwukọrịta nwere ike ịbụ mpaghara nke kacha achọ igwefoto ahụ, ozi dị ezigbo mkpa n'agbanyeghị na ọ dịla mgbe niile mana ọ bụrụla nke ka mkpa. N'ime ụlọ ọrụ nkwukọrịta ebe a na-achịkọta njikọ anyị na ndị mmadụ ịgafe ozi, ọ dị mkpa na a na-enyocha ha karịsịa maka njikarịcha arụmọrụ. Inwe kamera dị na ha na-enyere aka ịma ihe ha na-eme, ọ na - eme ka ị nwee ike lelee ụzọ ha si edozi nsogbu mkparịta ụka mgbe ana akpọọ oku. Ọ na - eme ka ọ dị mfe ịhụ ihe ndị injinia na saịtị ahụ na - eme - ọkachasị mgbe ị na - achọ ijikọ ngwaọrụ. Mgbe ejiri igwefoto ahụ nye mmadụ ntụziaka site na ebe dịpụrụ adịpụ, ọ ga-ekwe omume ịmata ma a na-agbaso ozi a na leta ma ọ bụ na-eleghara ha anya. Iji kamera ahụ mee ma rụọ ọrụ na nkwonkwo ọ bụrụ ọkachamara ga-eme n'ọhịa ahụ ka ọ na-eduzi onye injinia idozi ụfọdụ okwu okwu nkwukọrịta. Promptbụ ngwa ngwa idozi nsogbu dị oke mma ka ọ bụrụ na a na-eme ihe ọsọsọ ka ọ bụrụ na afọ ojuju ka usoro na ntụkwasị obi dị. Ọ dị mma ịmara na mgbe ụfọdụ igwefoto nwere ahụ nwere ike ghara ịmacha nke ọma, mgbe ụfọdụ ọ nwere ike ịchọ karịa igwefoto iji nyocha nyocha nke ọma.
Eletriki, gas na ọrụ ọcha: Inwe igwefoto eji aru ya na aru oru ma obu ike ngbasa ozi nwere ike idi ezigbo uru, otu a ka o si kwe omume ihe onye oru aka a n’eme oge na imezi ya mgbe o n’emehie. Ọ dị ezigbo mkpa inwe ike isoro ndị ọrụ kwurịta okwu ka ha na-arụ ọrụ ileba anya n'ọrụ ha ma nweta mmelite na ọganihu ha. N'ime ụlọ ọrụ gas, n'ebe mmịpụta nwere kamera ahụ nwere ike inye aka nyochaa ma ọ bụrụ na ndị ọrụ ahụ na-eme ụkpụrụ nchekwa ma ghara ịnwale ime mpụ ọ bụla. N'ebe a na-ere ahịa na mpaghara ụfọdụ enwere ike ịme ndị na-ere mkpọsa gas iji kamera ahụ iji nyere aka mara ọnụ ahịa ha na-ere na ọ bụrụ na ire ahịa a na-egosi na vidiyo kwekọrọ na akụkọ ahịa ha nyefere. Ọrụ ụlọ ọrụ metụtara ịdị ọcha yana ndị ọrụ ịdị ọcha na-arụ ọrụ ndị a, ya na igwefoto ahụ na-eyi ya, ọ bịara dị mfe ịhụ na ole onye ọrụ ahụ na-arụ na ike ọ na-etinye iji mee ka ọha mmadụ dị ọcha. Na igwefoto ndị ọrụ nwere ike ikpebi ngwa ngwa onye na-arụ ọrụ nke ọma ịdaba n'ihe ha chọrọ na onye na-anaghị ahụkarị.
Azụmaahịa n’ime ụlọ ọrụ ire ahịa ebe a na-enwekarị igbe na ịkụ ọkpọ nke ndị na-ebuga ya na ọnọdụ dịgasị iche iche ebe achọrọ ha, ọ dị ezigbo mkpa na enwere anya na ndị ọrụ ahụ ka ụgbọ ala nwere ike na-efu efu ma ọ bụrụ na e lebaraghị ndị ahụ anya. ihe omume na-aga. A ga-ahụta mmemme igwefoto ahụ a na-ahụ anya dịka nzọụkwụ dị mkpa n'ụzọ dị mma ka ọ ga-ekwe omume ịhụ ihe ndị ọrụ na-etinye oge ha. Inwe igwefoto ahụ na-eme ka ịdalata nwayọ wee mepụta mmata nke na-eme ka ha dịrị na mkpịsị ụkwụ ha. Nke a bụ ụdị mmụọ ọ bụla onye ọrụ ga-ahụ n'anya, ebe igwefoto dị na ndị ọrụ ha agaghị enwe obere ohi ohi ma ọ bụ ime ụdị ụdị mpụ ọ bụla n'ebe ọrụ. Ihe nchekwa nwekwara akụkụ nke igwu egwu na nnukwu usoro dịka a ga-enwe kamera ga-enyere ya aka, na-enyere ya aka ịlele onye ọ bụla na-abanye ma na-arụ ọrụ. Ka ị na-arịọ maka ya, na-enyochakwa ihe ụgbọ ala ndị ahụ na-ebu, ha nwere ọrụ dị oke mkpa ha kwesịrị ịrụ gbasara ịkwụsị ịpụ. Ọ dị mkpa ndị nọ na njikwa na ohere ịbanye ebe a na-ahụ vidiyo na ihe nkiri dị ka ndekọ ma ọ bụ ozugbo, ndị maara ihe ma nwee ike ịghọta ọnọdụ niile mgbe ị na-ekpe ikpe.
Azụmaahịa: dị ka azụ ahịa azụmaahịa, azụmaahịa chọrọ ọtụtụ nleba anya na nlebara anya. Inwe CCTV nwere ike ọ gaghị abụ foto zuru oke iji kpochapụ ihe, ịnwe igwefoto ahụ na-enye ike ịhụ ihe onye na-ere ahịa gị na-eme. Inwe igwefoto naanị ya na-ebulite ọkwa ịmara, yabụ mee ka onye ọrụ ahụ na-agbaso usoro iwu na ụkpụrụ dị iche iche. Ndị ọrụ na-agbadata obere oge ma ha agaghị enwe ike izu ohi, igwefoto ahụ na-enyekwa aka ịchọpụta na ọnụ ọgụgụ ndị ahịa nọ na vidiyo ahụ na akụkọ ahịa. Mgbe enwere nsogbu maka ọghọm ego ma ọ bụ nke anabataghị maka ngwaahịa, otu n'ime ebe kachasị mma ịmalite nyocha ahụ bụ ihe ngosipụta ụlọ ọrụ ahụ. Site na stampụ oge a na vidiyo ahụ, ọ ga - ekwe omume ịchọpụta ụbọchị erere ere ma chọpụta ihe na - eme n'ezie. N'ihe banyere mfu ego, ya na igwefoto ahụ, a ga-egosipụta ya na ihuenyo mgbe mmadụ na-ezu ohi njikwa ego ha. Site n'inwe ihe ngosi dị ka ndị a, Ọ ga - ekwe omume tufuo ma jide mmadụ ndị ahụ. N'iji ihe akaebe mee ihe ị ga - enye, ọ ga - abụ ikpe dị mfe iji dozie.
Ego, Inshọransị na ezigbo ụlọ: na ngalaba ụlọ akụ na ego ebe enwere nnukwu ego na nnubata ego, ndị mmadụ na-achọ ịnwa idebe ụfọdụ. Nke a bụ ihe ọjọọ ma bụrụ onye amamikpe, ịgụta ma ọ bụ ijikwa ego anaghị enye gị ikike ọ bụla. Inwe igwefoto eyi ya na onodu di ka nke a nwere ike igosiputa nke oma dika odighi onye gha acho izu ohi ego mgbe ahuru ihe ha na eme. Industrylọ ọrụ inshọransị metụtara ịgba mbọ mara ngwongwo, ngwongwo na ndụ ha. Ndị ọrụ mmadụ nwere ike iji igwefoto ahụ rụọ ọrụ mgbe ha na-anọ ọrụ, enwere ike ilegharị ya maka nyocha. Enwere ike iji vidiyo si na vidiyo ha dị ka ngalaba ahụmịhe nke enwere ike iji maka agụmakwụkwọ ma emesịa. Ha nwere ike mehie ụzọ na amụma mkpuchi ha ma ọ bụ bịaruo nso, mana ọ dị mkpa ka ha mụta ihe site na mmejọ ndị ahụ wee gbakee. Ijikwa ala na ụlọ na-erekarị ala na ala, enwere ike iji ya nweta foto ma ọ bụ onyonyo nke otu ụlọ nwere ike izigara ụlọ ọrụ ahụ maka nyocha. Ijikwa ụlọ na-akawanye mma site na igwefoto ahụ nwere anụ ahụ n'agbanyeghị na ị ga-arụ ezigbo ọrụ ọ bụla ma ọ dị njọ ị ga-achọ igwefoto dị ike iji wee rụọ ọrụ ahụ nke ọma. Ebe ọ bụ na ejiri foto ihe dị elu na-achọ ma achọrọ na njikwa ụlọ ọ bụ ya mere ihe dị mkpa na-eji igwefoto ụdị ahụ siri ike dị egwu.
Ugbu a na akọwaala ngalaba ndị a obere, anyị amatakwala mkpa ọ dị igwefoto ahụ nwere eyi. Nessdị arụmọrụ ha na otu ha nwere ike isi mee ka ụlọ ọrụ anyị kwesịrị ịbụ ihe kachasị mkpa na echebara echiche. Site na ihe ndị a niile kwuru na ọ dị mkpa ka anyị mara nsogbu ndị kachasị eserese na kamera ga-ezere. Okwu banyere nzuzo bụ nnukwu nsogbu na igwefoto n'ozuzu, ọ bụrụ na ị ga-eji igwefoto ahụ ọ dị ezigbo mkpa ịgbaso iwu steeti gbasara ha. Ọ dịkwa ezigbo mkpa na mgbe ị na-edekọ ndị mmadụ na ha ga-ama ihe na-emenụ. Ọ bụ ihe ọjọọ na ịdekọ ndị mmadụ n'enweghị ihe ọmụma ha. Mgbe ị na-edekọ ma nwa amaala rịọrọ ka ị kwụsị ya, ọ dị ezigbo mkpa ka imee ma ọ bụ nwee ike ịgba gị akwụkwọ maka ụgwọ ụfọdụ. Mgbe ndị were n'ọrụ kpebiri i toomi kamera ahụ eji eme ahụ ọ dị mkpa na a gwara ndị ọrụ, ha ga-ekwenye ma banye mgbe ahụ a ga-azụrịrị ha otu esi eji ya dị ka ndị ọkachamara.
Ndị nkatọ akọwapụtara ọtụtụ nsogbu nwere mmetụta dị mgbagwoju anya metụtara nzuzo nke ụmụ amaala, ịnweta ndekọ nke onwe yana ndekọ nke ndị na-adịghị ike dịka ụmụaka. Ndị a bụ nsogbu ndị nkatọ rụtụrụ aka na ya dị ka okwu nke na-esite na iji ese foto eji ahụ n'ahụ ọha mmadụ. N'ihi nke a ndị ụlọ omebe iwu na-enye ọzụzụ siri ike ma nweekwa iwu na iwu gbasara iji igwefoto zere ịbanye na nsogbu mgbe ị na-anwa idozi otu. Mana maka ndị ọrụ okike ndị nwere ike ịchọ iji otu ngwa ọrụ a, ọ ga-adị mkpa ka ha mata na iwu nzuzo ga-enwerịrị ịgbadoro anya.
Mmetụta igwefoto ahụ yi
Onwe-amara gbasara onwe gị: nke a gụnyere ịmara na a na-ele gị, makwaara nke a dị ka ịmara nzube onwe onye. Mmata na-abawanye mgbe mmadụ hụrụ na a na-ele ya. Mgbanwe akparamàagwa na-eme, enwere mgbanwe na omume ndị ọha mmadụ nabatara, site na nke a, a nwapụtara na ihe ọ bụla na-eme ka mmadụ lekwasị anya na ọdịmma ha na-abawanye mmata. Igwefoto ahụ na-eyi bụ otu n'ime ụzọ dị iche iche ịbawanye ama gbasara ndị nkịtị ma mee ka ha mara na omume ha ka a na-elezi ma na-edekọ. Nke a bụ usoro iji mee ka ha gbochie ime ihe na emebi iwu. -Mata onwe gị bụ isi ihe ana - elebanye anya, ozugbo mmadụ matara na edekọtara ha, ha na-eme omume ziri ezi ma gbanwee gbanwee omume kacha mma.
Nkwanye maka iji teknụzụ
Nkwado maka teknụzụ eji eme ihe bụ:
Usoro igwefoto ga-enwerịrị opekata mpe otu afọ site na ụlọ ọrụ ọ bụla a na-azụta ya
Igwefoto kwesịrị inwe otu obere ọkụ ọkụ na-enye ohere idekọ ngwa ngwa ọbụlagodi ebe enweghị ọkụ
Nzuzo 6056 3 Echiche Taa